Vaovao - Arahabaina nahatratra ny "Fandresena roa"
Tamin'ity taona ity, ny SNS dia tsy nandalo ny fanamarinana ny andiany voalohany amin'ny teknolojia avo lenta any amin'ny faritanin'i Zhejiang tamin'ny taona 2020, ny isa laharana dia 2583. Ary nahazo ny mari-pankasitrahana "Zhejiang Science and Technology Small and Medium-size" navoakan'ny Zhejiang Science Departemantan'ny Teknolojia.
Tao anatin'izay taona faramparany izay, ny SNS dia nitombo hatrany ny fampiofanana sy ny fampiasam-bolany tamin'ny ekipa R&D, nanatsara hatrany ny fizotrany, ny teknolojia nohavaozina, ary namorona vokatra vaovao, ary nanangana laboratoara fitiliana valeno azo itokiana solenoid miaraka amin'ny Oniversite Zhejiang. Tao anatin'ny herintaona monja tamin'ny 2019 ka hatramin'ny 2020, patanty 13 no nangatahana (anisan'izany ny patanty famoronana 3, maodelim-pitaovana 8, ary patanty fisehoana 2).
Ny valiny tsara dia fampaherezana, nefa koa mandrisika. Miantehitra amin'ny teknolojia, ny SNS dia manohy manavao, mampitombo ny fampiasam-bola R&D, manatsara ny tanjaky ny fampandrosoana ny orinasa, ary manatsara ny endrik'ilay orinasa. Omeo serivisy mahomby kokoa ny mpanjifa. Manomeza fanohanana matanjaka ara-teknika ho an'ny fampandrosoana ho an'ny kalitao avo lenta!